IGolide eNyibilikayo enyibilikayo abenzi beembhobho zeceramic ezisuka eTshayina | XTL
I-Melting Crucible isetyenziswa kakhulu ukunyibilikisa iintsimbi ezixabisekileyo, ezifana neGolide, iSilivere, iBronze, iCopper, iBrass nokunye.
I-Crucible Capacity yi-40 T.oz./1200 Grams, yenziwe ngodongwe oludityaniswe nesilica edityanisiweyo yodidi oluphezulu, ixesha elide D yoma F/ iyamelana namaqondo obushushu ukuya kuma- 2500 F / 1371 C.
I-Fire Assay Crucibles inobuxhakaxhaka obuphezulu kunobuqhelekileyo bokuqhekeka phantsi kweemeko zokuvavanywa komlilo. Iikhreyibhile zethu kunye neemveliso ezichasayo zisetyenziswa kwiilebhu kuyo yonke imarike yamazwe ngamazwe. Sineentlobo ngeentlobo zeemilo kunye nobukhulu obukhoyo ukukhawulelana neenkcukacha ezifunekayo.
Izibonda zethu zinika ubomi obude, ukunyibilika ngokukhawuleza, isantya sokunyibilika rhoqo kunye nokuchasana okukhethekileyo nobundlobongela obutshintsha ubushushu.
Iingqayi zokunyibilika zegolide izitya ze-ceramic